မဆိုင်ဂလိုင် လာခေါက်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Education » မဆိုင်ဂလိုင် လာခေါက်ခြင်း	18
- lady finger
Posted by lady finger on Jan 9, 2015 in Education | 18 comments
post လေးတစ်ပုဒ်ရေးပြီးနောက်ထပ်မရေးဖြစ်လိုက်တာ ရေးမယ့်ရေးတော့လည်း အရပ်ကူပါလူဝိုင်းပါ post ဖြစ်နေပါလားလို့ ထင်ချင်လည်းထင်ပါတော့ရှင် ။
google မှာဖွတာ မရလို့ ဒီစာအုပ်ကလေး လေးအုပ်ရဲ့ online free download link လေးများ သိကြရင် မစကြပါရှင်။ Exam အတွက်ရှာနေလို့ပါ။
အဲ ..free ရဘူးဆိုရင်လည်း တတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်..
1. Handbook of Rigging by Joseph A.MacDonald
2. Construction Management (CM 188)
3. Construction Methods and Planning by J.R.ILLINGWORTH
4. All in one civil Engineering PE.Breadth and Depth
စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သွားခဲ့ကြရင်လည်း ရွာသူရွာသားအားလုံး so so sorry ပါနော်။ မဆီလေးရယ်မှမဆိုင်ဆိုပေမယ့် (အဟီး) နိုင်ဂံဂျားက ဖလန်းဖလန်း ကိုးနတ်ရှင် ပိုင်ရှင်တွေကို အားကိုးကြည့်တာပါ။
About lady finger
lady finger has written5post in this Website..
View all posts by lady finger →	Blog
ko six says: ဘာပါလိမ့်​ဆိုပြီး
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 52
chate chate says: :byae:
chate chate says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ Professional စာအုပ် တွေ က အင်တာနက်ထဲ Free download မရှိလောက်ပါဘူး ထင်ပါတယ်။
ရှိတယ် လို့ပြထားရင်လဲ ဗိုင်းရပ်စ် ထည့်ဖို့ အတွက် ဟန်ပြ link တွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
စာမေးပွဲ ဖြေမဲ့ ဆိုင်ရာ နေရာမှာ မေးပြီး အကြံတောင်းတာ အကောင်းဆုံးပါဘဲ။
ကံကောင်း ရင်တော့ ရွာထဲ ဒီလို စာအုပ်ပိုင်ရှင် ရှိနေမှာဘဲ။ အနည်းဆုံးတော့ ငှားဖတ်လို့ ရမှာ။
Let’s see your luck! Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 52
chate chate says: ဟုတ်ကဲ့ရှင့်…. ဟန်ပြ link တွေဆိုတာဟုတ်မယ်ထင်တယ် အရီး free download လို့ပြထားပြီး တကယ်ဝင်ကြည့်တော့မရဖြစ်နေတာ ကွန်ကစုတ်တာလည်းပါတယ်
ရွာထဲမှာစာအုပ်ပိုင်ရှင်ရှိရင်တော့ ထီပေါက်တာပဲ :D
အလင်းဆက် says: .သေချာတာတော့…
.အဲ့စာအုပ်တွေ ကျနော့်မှာ မရှိဘူး ။
.သေချာမလား မသေချာဘူးလားတော့ မသိဘူး…
chate chate says: ဟုတ်… စိတ်ထဲထည့်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးကျေးနော် ဆက်ဆက်
ဖားသက်ပြင်း says: ပ​လေးဘွိုင်းပဲရှိတယ်​
chate chate says: အလို ဘတ်စ်စကားတွေပြောနေပါလိမ့် 8o
chate chate says: 8O
chate chate says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7172
kyeemite says: .ကျုပ်အထင် ကေဇီ (အခု ခင်ဇော်) ဆီရှိလောက်တယ်..သူက Construction တွေလုပ်နေတာ
.ဖွဘုတ်က ဂဇက်ရွာသူား ဂရုထဲဝင်ချိတ်ရင်တော့တွေ့လောက်တယ်ဗျ
ခင်ဇော် says: နာ့ ဂလိုင်ကို လာခေါက်တဲ့ မိုက်မိုက်…!!
ပထမဆုံးးးအုပ် ရှိတယ် မန်းးးလေးးးမှာ ပြန်ရှာရမှာာာ
ခု Construction လုပ်ဘူးးးး
အဲ့လို လွဲတဲ့ ခင်ဇော် ရယ်ပါ…!!
chate chate says: မန်းလေးကို တွားရှာလိုက်ရမားဟင်င်င်င်…. :grin:
နောက်တာ အခု MES ဂလိုင်ကိုသွားခေါက်နေတယ်
chate chate says: ဟုတ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7172
kyeemite says: .ဟုတ်တယ်လေ..နာတိတာ နီပဲချိတာကိုး ခင်ဇော်ရဲ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4670
ခင် ခ says: အဲဒါတွေတော့ သိပါဘူးဗျာ။
soe soe says: fb ကမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာမှတ်စုတိုများ မှာရှာကြည့်ပါ။ free download ရပါတယ်။